नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नक्कली राष्ट्रबाद, कोशी ब्यारेज, ५६ ढोका र राता बत्ती !
नक्कली राष्ट्रबाद, कोशी ब्यारेज, ५६ ढोका र राता बत्ती !
यो क्रम यतिमै रोकिएन । निरन्तरको वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाब बढ्दै गयो । पानी परेसँगै कोशी ब्यारेजमा पानीको मात्रा स्वाभाविक रुपमा बढ्यो । राति कोशी ब्यारेजमा ३ लाख ७१ हजार क्यूसेक प्रतिसेकण्ड पानीको बहाब रहेको मापन भएको थियो । पानीको मात्रा बढ्दै गएको र ब्यारेजमा बालुवा र
काठहरु थुप्रिँदै गएपछि ब्यारेजका सबै ढोकाहरु खोलिए । त्यसपछि फेरि सुरु भयो असली राष्ट्रवाद ।
हामी सम्झौताका अनुसार केही पनि गर्न सक्दैनौँ । गर्ने सबै भारतीय भएकाले उनीहरुसँगको सम्बन्ध राम्रो भए मात्रै तटीय क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था बलियो हुन्छ । कोशी बाँध खोल्न नेपाललाई भारतले दबाब दियो भन्नु त आँखा नभएको मानिसले हात्ती छामछुम गरे जस्तो मात्र हो । - सुमन पुरी / उज्यालो
Posted by www.Nepalmother.com at 3:39 AM